ကွန်ပျူတာနှင့် အိုင်တီကို ကိုယ်တိုင် လေ့လာရာတွင် အသုံးဝင်မည့် နည်းလမ်းများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ကွန်ပျူတာနှင့် အိုင်တီကို ကိုယ်တိုင် လေ့လာရာတွင် အသုံးဝင်မည့် နည်းလမ်းများ
ကွန်ပျူတာနှင့် အိုင်တီကို ကိုယ်တိုင် လေ့လာရာတွင် အသုံးဝင်မည့် နည်းလမ်းများ
Posted by manawphyulay on Sep 4, 2010 in Computers & Technology, Creative Writing, Drama, Essays.., Know-How, DIY, Software & Links |4comments
ကွန်ပျူတာနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုတဲ့ Programmer, Software Developer, Network Engineer, Designer စတဲ့သူတွေ မဟုတ်ခဲ့ရင်တောင် ကွန်ပျူတာနဲ့ မကင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့်ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ အိုင်တီကို Self Study လုပ်ဖြစ်သွားစေတဲ့ အတွေးလေးတစ်ခုကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။
“ ပိုက်ဆံရှိရင် ကွန်ပျူတာ ၀ယ်လို့ရတယ်။
တနည်းအားဖြင့် ပိုက်ဆံရှိရင် ကွန်ပျူတာဆိုတာ ရှိနိုင်တယ်။
ကွန်ပျူတာ ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာ သင်ပေးနိုင်တဲ့သူ မရှိနိုင်ဘူး။
ကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက် လေ့လာရင် လေ့လာသလောက် ကိုယ်ပြန်ရမယ်…”
ကျွန်တော့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို ထိတွေ့၊ သုံးစွဲ၊ လေ့လာနေဆဲ အတွေ့အကြုံများ၊ လေ့လာနည်းများကို အခြေခံပြီး “ကွန်ပျူတာကို ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ”
(How to Learn or Self Study about Computer and IT?) မေးခွန်းကို အခုလို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်ဖြေ ကြည့်ပါတယ်။ အောက်မှာ
ဖော်ပြထားတာလေးတွေက အတိုချုံးလေးတွေ ဖြစ်ပြီးတော့ အသေးစိပ်ကို နောင်မှာ ဆက်လက် ဝေမျှ သွားမှာပါ။
Self-Studying – ကိုယ်တိုင် လေ့လာခြင်း
ကွန်ပျူတာ အကြောင်းကို အမြဲတမ်း စိတ်ဝင်စားပါ။ (ချစ်သူရည်းစားကို စိတ်ဝင်စားသလောက် ကွန်ပျူတာကို စိတ်ဝင်စားပါ။ သို့သော် ချစ်သူရည်းစားကို
ထည်လဲပြောင်းသလိုတော့ ကွန်ပျူတာကို ထည်လဲ မပြောင်းပါနှင့်။ – အစပိုင်းတွင် Windows, Mac, Linux စသည့် OS တစ်ခုခုကို ရင်းနှီးအောင်
သုံးတတ်စေရန် ဆိုလိုပါသည်။)ကွန်ပျူတာ ကိုင်ရသည် ဖြစ်စေ၊ မကိုင်ရသည် ဖြစ်စေ ကွန်ပျူတာနှင့် ပတ်သက်သည်များကို လေ့လာနေပါ။
(အလွန်အရေးကြီးပါသည်။) ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လေ့လာရတာ မလွယ်ပါ။ သို့သော် အလေ့အကျင့်ရသွားလျင်တော့ မခက်တော့ပါ။
IT Social Networking – အိုင်တီ အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများ
ကွန်ပျူတာကို မိမိကဲ့သို့ အရူးအမူး စိတ်ဝင်စားသူများနှင့် မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါ။ထိုမိတ်ဆွေများနှင့်အတူ မိမိ သိထားသည်များကို ဖောက်သည်ချ ဝေမျှပေးပြီး၊
မသိသေးသည်များကို မေးမြန်းပါ။တစ်ပြိုင်တည်းမှာပင် မိမိအတွက် အသုံးဝင်သည့် နည်းလမ်းများ (Tips and Tricks)၊ လေ့ကျင့်ရေး သင်ခန်းစာများ
(Tutorials) နှင့် အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲများ (Application Software) ကို မှတ်သားခြင်း၊ စုဆောင်းထားခြင်းများ ပြုလုပ်ပါ။
Having Good Moral – စေတနာကောင်းထားပါ
အခြားသူများကိုလည်း ဖလှယ်ပါ။ ဝေမျှပါ။ (ကိုယ်ရသလို ကိုယ်သိသလို သူများကိုလည်း သိစေချင်၊ ရစေချင်သည့် စေတနာကောင်းသည် လူတိုင်းတွင်
မရှိသည့်၊ လူတိုင်း ထားရှိ မွေးမြူသင့်သည့် စိတ်ဓါတ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး၊ ကိုယ်တိုင် လေ့လာသင်ယူမှု (Self study) အတွက် နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အလွန်ပင် အထောက်အကူပြုလေသည်။)
Learning by Internet – အင်တာနက်မှ လေ့လာခြင်း
အင်တာနက် သုံးခွင့်ရသည့် နေရာတွင် အင်တာနက်ကို ရအောင်သုံးပါ။ အင်တာနက်သုံးရသည့် အချိန်တွင် မည်သည့် အကြောင်းအရာများကို လေ့လာမည် ရှာဖွေမည်ကို – အင်တာနက် သုံးခွင့် မရသေးသည့် အချိန်များတွင် ကြိုတင် ပြင်ဆင် မှတ်သားထားပါ။ သို့မှသာ အင်တာနက် တကယ် သုံးခွင့်ရသည့် အချိန်တွင် ထိရောက်စွာ၊ အကျိုးရှိရှိ သုံးနိုင်မည်။
Using Search Engines – ရှာဖွေရေး ၀က်ဘ်ဆိုက်များကို သုံးခြင်း
Search Engine များကို သုံးတတ်အောင် လေ့လာပါ။ အင်တာနက်ထဲတွင် လှိုင်းစီးနိုင်ရန် (Internet Surfing)၊ အချိန်တိုအတွင်း လိုရာခရီးအမြန်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် Search Engine များသည် တစ်ဦးချင်းစီ၏ အသုံးချနိုင်စွမ်းအပေါ် မူတည်ပြီး (လိပ်တစ်ကောင် ဖြစ်နိုင်သလို)
ဒုံးပျံတစ်စင်းကဲ့သို့လည်း လိုရာခရီးသို့ လျင်မြန်စွာရောက်ရှိစေရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။
Using Search Keywords Effectively – သော့ချက်စကားလုံးများကို ထိရောက်စွာ သုံးခြင်း Search Keywords များကလည်း အင်တာနက်ထဲမှ လိုရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အမြန်ဆုံးရရှိစေရန် များစွာ အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေသည်။
သော့ချက်စကားလုံးများကို မှန်ကန်စွာ သုံးတတ်မှ အင်တာနက်တွင် ရှာဖွေမှု မြန်ဆန်မည် ဖြစ်သည်။
အင်တာနက် စကားဝိုင်းများ (Internet Forums) မှတဆင့် အခြားသူများ ကြုံနေရသည့် အခက်အခဲများ ပြဿနာများကို ကြိုတင်လေ့လာ
သိရှိထားနိုင်သည်။ မိမိတို့၏ ပြဿနာများကို အများသို့ ဝေမျှ အသိပေး အကူအညီတောင်းနိုင်သည်။ ထို့ထက် အဆင့်မြင့်လာပါက ကိုယ်တိုင်
Wikipedia – အခမဲ့ အွန်လိုင်း စွယ်စုံကျမ်း
အခမဲ့ အွန်လိုင်း စွယ်စုံကျမ်း (Wikipedia) ကို အင်တာနက်သုံးသူတိုင်း လက်မလွှတ်သင့်ပါ။ တခါတရံ မသိသေးသည့် အကြောင်းအရာသစ် တစ်ခုကို စတင်လေ့လာရတော့မည့် အခါတွင် ဘယ်ကစလေ့လာရမှန်း မသိ၊ ဘယ်လို ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ သွားကြည့်ရမည်ကို မသိသေးလျင် ၀ီကီပီဒီယ မှာ
အရင်သွားကြည့်ပြီးမှ ဆက်လုပ်လို့ အဆင်ပြေသည်များ ကြုံဖူးပါသည်။
Reading by RSS – RSS ဖြင့် စာဖတ်ပါ
သွားချင်သည့်၊ စိတ်ဝင်စားသည့် ၀က်ဘ်ဆိုက်ပေါင်း 30 ရှိပြီး အင်တာနက်သုံးခွင့်ရသည့် အချိန်နှင့်ငွေကြေးအင်အားက တစ်နေ့လျင် တစ်နာရီစာသာ အခွင့်အရေးရသည်ဆိုပါစို့။ ထိုအခြေအနေအတွက် ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါင်း 30 သို့ တစ်ခုချင်းစီ သွားဖတ်နေမည့်အစား ၄င်းဆိုက်များမှ ပေးထားသည့် RSS Feed များကို နှစ်သက်ရာ RSS Reader (Google Reader, Great News Portable RSS Reader, etc) ဖြင့် ဖတ်ရှုခြင်းက အချိန်နှင့်ငွေကြေးကို အထိရောက်ဆုံးကို အသုံးချရာရောက်သည့် အပြင် စိတ်ရောလူရော လွယ်ကူ သက်သာစေသည်။
Learning at Training Schools – သင်တန်းများ တက်ခြင်း
သင်တန်းတက်နိုင်လျင်၊ သင်တန်း တက်ခွင့်ကြုံလျင် သင်တန်းတက်ပါ။ တခါတရံတွင် ကိုယ်တိုင်အကြာကြီး လေ့လာမှ သိရမည့် အရာများကို သင်တန်းများတွင် မိနစ်ပိုင်းလောက်မျှနှင့် သိရှိနားလည်သွားနိုင်သည်။ KMD မှာ Basic Networking တစ်ခု တက်ဖူးပါတယ်… အဲဒါကလည်း အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ Cabling ကို သိချင်လို့ပါ။ RJ-45 ခေါင်းနဲ့ Cat-5 ကြိုးတွေ ချိတ်ဆက်တာကို စာဖတ်ကြည့်ရုံနဲ့ မရ လက်တွေ့လည်း
သိမှ ဖြစ်တော့မှာမို့ သွားတက်ဖြစ်တာ။ သင်တန်းတိုင်း မကောင်းနိုင်ပေမဲ့ တက်ဖြစ်တဲ့ သင်တန်းမှန်သမျှမှာ ရသမျှ အရင်းအမြစ်တွေ ကို ထိရောက်အောင် သုံးနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒါမှ သင်တန်း တက်ရကျိုး အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်၊ လူပင်ပန်းရကျိုးတွေ နပ်မှာပါ။ သင်တန်းမှ သင်ရိုးများ၊
လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ နည်းပြ ဆရာ/ဆရာမများ၊ အတူတက်နေသူများဟာ အကောင်းဆုံး အရင်းအမြစ်တွေပါပဲ။
Using OSF (Open Source Free) Softwares
အခမဲ့ရသည့် အပွင့်ဆော့ဖ်ဝဲများကို သုံးပါနိုင်ငံတကာတွင် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ရန်၊ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ယှဉ်တွဲ အလုပ်လုပ်ရန်၊ သို့မဟုတ် လိပ်ပြာသန့်စွာ ၊ ဘေးရန်ကင်းစွာ နေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် အလကား ရသည့်ဆော့ဖ်ဝဲမှန်သမျှကို သုံးခြင်းထက်၊ အလကားရသည့်
အပွင့်ဆော့ဖ်ဝဲများ (ကျွန်တော်က Open Source Free (OSF) Software များဟု ကိုယ့်ဘာသာ အမည်ပေးထားသည်။) ကို ထိထိရောက်ရောက်
ကိုယ်တိုင်လေ့လာရတယ်ဆိုတာ ခရီးကြမ်းတစ်ခုပါ။ မလွယ်ပါဘူး။ လူတိုင်းလည်း ရေရှည် မလျောက်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်း၊ အထူးသဖြင့် ဘ၀မှာ
ပညာကို ချစ်ခင် မြတ်နိုးသူတိုင်း တစ်ခုခုကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာကြည့်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ကြပါတယ်…။ ရလာတဲ့ မြင်ရတဲ့ အကျိုးဆက်တွေ၊ မမြင်ရတဲ့
အကျိုးဆက်တွေကိုတော့ ဘာသာရပ်တစ်ခုခုကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာ သင်ယူလေ့ကျင့်ဖူးသူတိုင်း ခံစားနားလည် သိရှိနိုင်မှာပါ…
စာဖတ်နေတဲ့ ချစ်မိတ်ဆွေရော ဘ၀မှာ ဘယ်လို Self Study လုပ်ခဲ့ဖူးလဲ …အများအတွက် ဝေမျှ ဆွေးနွေးသွားစေချင်ပါတယ် ….
PostSubject: အိုင်စီတီ အခွင့်အလမ်းများ Mon Jul 19, 2010 3:10 am
ယနေ့ခေတ် ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကြားမှာ ကွန်ပျူတာ၊ အိုင်တီ၊ အင်တာနက် ဆိုတဲ့ဝေါဟာရတွေက ပလူပျံအောင်ကြား နေရပါတယ်။ များပြားလှတဲ့ ကွန်ပျူ
တာသင်တန်း ပေါင်းစုံ လက်မှတ်ပေါင်းစုံ နောက်မှလူငယ်တွေခမျာ ငွေထုပ်ပိုက်ပြီး တကောက်ကောက်လိုက်တက် နေကြရပေမယ့် တကယ်တမ်း
သင်တန်းတွေပြီး လက်မှတ်တွေရကြတဲ့အခါ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ယောင်ချာချာ ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ နိုင်ငံခြားထွက်
အလုပ်လုပ်ဖြစ်ကြပေမယ့် ICT ဆိုတာပြည်တွင်းမှာ အသုံးချလို့မရတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခု လိုဖြစ်နေပါတယ်။
တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေ အတွက် ICT နည်းပညာ ကိုအသုံးချပြီး ပြည်တွင်းမှာ တစ်ပိုင်းတစ်နိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ SME (Small and Medium
Sized Enterprise) လုပ်ငန်းလေးတွေ များစွာရှိပါတယ်။ တစ်ချို့လူငယ်တွေက အသက်အရွယ်ငယ်သေးလို့ စီးပွား ရေးလုပ်လို့ဖြစ်ပါ့မလားလို့ စိုးရိမ်ကြတာ
ရှိပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပါတ်သတ်လို့ ကမ္ဘာကျော်ဘီလျံနာသူဌေးကြီး ဒေါ်နယ်လ် ထရန့် (Donald Trump) ပြောဖူးတာလေး ရှိပါတယ်။
`ကိုယ်ကငယ်လေးလို့၊ အတွေ့အကြုံနည်း သေးလို့ စီးပွားရှာဖို့ အရည်အချင်းမပြည့်သေးဘူးလို့ ဘယ်တော့မှမတွက်ပါနဲ့။ ကျွန်တော်အကောင်းဆုံး
အကြံဉာဏ်တွေထုတ်သုံးခဲ့တုန်းက အသက်နှစ်ဆယ်ပဲရှိသေးတယ်။ဒါ့ကြောင့်ငယ်သေးလို့ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည် မှုအားမနည်းပါစေနဲ့။
တစ်ခါတစ်လေမှာ လူငယ်တွေဟာ ပိုပြီးထက်မြက်တဲ့ စီးပွားရေးပညာရှင်တွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်တဲ့။´
ကဲ…ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူငယ်တွေလဲ ICT ကိုသုံးပြီး ထက်မြက်တဲ့ စီးပွားရေးပညာရှင်တွေ ဖြစ် အောင် ဘာတွေလုပ်နိုင်ကြပါသလဲ။ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ဘယ်လိုပါ ၀င်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသလဲ။ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
ဒါကတော့ သမားရိုးကျနည်းလမ်းဖြစ်တဲ့ ၀န်ထမ်း အလုပ်ပါ။ လူငယ်တွေအနေနဲ့ ပြည်တွင်းမှာပဲ သင်ကြားလို့ ရတဲ့နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု
ဒီပလိုမာတွေဖြစ်တဲ့ IDCS တို့ IADCS တို့၊ University of Greenwich ကပေးအပ်ချီး မြှင့်တဲ့ BIT ဘွဲ့တို့ကို ရရှိပြီးရင် ဒေသတွင်း အိုင်စီတီဖွံ့ ဖြိုးတဲ့
စင်္ကာပူတို့လိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာသွားရောက် အလုပ် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြပါတယ်။ များသောအားဖြင့် စင်္ကာပူမှာဆို ရင် Programmer, System Analyst, Network
Engineer, Project Manager စတဲ့ရာထူးတွေမှာ မြန်မာတွေလုပ်ကိုင် ကြတာများပြီး လစာကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ လောက်ကနေ
၅၀၀၀လောက် အထိရတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ Project Manager (PM) လို ရာထူးမျိုးဆိုရင်တော့ MBA ဘွဲ့လိုမျိုးပါတွဲရထားရင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်
သောင်းလောက်အထိ ရတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကိုယ့်မြေပေါ်မှာပဲ ရပ်တည်နေချင်တဲ့သူတွေ၊ နိုင်ငံခြား သွားဖို့ဇာတာမှေးမှိန်နေသေးတဲ့
သူတွေအနေနဲ့ကတာ့ ပြည်တွင်းက အိုင်တီစီးပွားရေးလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် NGO တွေမှာ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။ စစခြင်းမှာတော့
ကိုယ့်မျှော်မှန်းထားသလို ၀င်ငွေ၊ အခြေအနေတွေကို ရ နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တန်းဘိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ ငွေပေး ၀ယ်လို့မရတဲ့ အတွေ့အကြုံ
(experience) ကိုတော့ ရရှိ မှာဖြစ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံတွေကို စုဆောင်းပြီး ကိုယ့်လိုအပ်ချက်တွေကို ထပ်ဖြည့်ရင်းနဲ့ ကိုယ်မျှော်မှန်းထားတဲ့
အခြေအနေကို တစ်ထစ်ခြင်းတက်လှမ်း ဖန်တီးနိုင်ပါ တယ်။
ဒီခေတ်မှာ သတိပြုရမဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ ဘယ် Professional လိုင်းကို လိုက်တဲ့သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ် လိုင်းတည်း တစ်မျိုးတည်း ရပ်တည်လို့
မရတော့ပါဘူး။ ယနေ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုဟာ T Person ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို သာလိုလားပြီး အလုပ်ခန့်လေ့ရှိ ကြပါ တယ်။ T Person
ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာက အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ T ကို ဇောက်ထိုးထားတဲ့ ပုံစံပါ။
ကျယ်ပြန့်တဲ့အသိပညာ (Wide knowledge) ပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ကိုယ့်ရဲ့Professional Skill ကို တည်ဆောက်ယူရတဲ့ သဘောပါ။ ဒါကြောင့် လူငယ်တွေအ
နေနဲ့လည်း ICT ကို လေ့လာပြီးတဲ့အပြင် MBA တို့လို စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်းတွေကို တွဲဖက်လေ့လာထားခြင်းအားဖြင့် အလုပ်အကိုင်ဈေးကွက် (Labour-
Market) မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဈေးကောင်းကောင်း (Skimming Price)နဲ့ အစွံထုတ်နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကဖီးတွေကို နေရာအနှံ့တွေ့မြင်လာရ ပါတယ်။ တိုးတက်လာတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးရေစီးတွေပေါ် မှာ အရင်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပေါ်က
လူငယ်တွေလည်း အင်တာနက်ကဖီးတွေပေါ်ကို ရောက်ကုန်ကြပါ တယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တုိ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အပြုသဘောဆောင်တဲ့
တိုးတက်မှုဖြစ်လို့ ကြိုဆိုကြရမှာပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဒီအင်တာနက်ကဖီးလုပ်ငန်း ဟာလည်း ICT ကိုအခြေပြုတဲ့ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်း
တစ်ရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ထွန်းလာပါတယ်။ ယေဘုယျ အားဖြင့် အင်တာနက်ကဖီးဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ အခန်းငှားခ၊ ကွန်ပျူတာဝယ်ဖို့ကုန်ကျစရိတ်၊
အခန်းပြင်ဆင်စရိတ်၊ အင်တာနက်လိုင်း၊ အလုပ်သမားစရိတ် စုစုပေါင်းသိန်း ၁၅၀ ၀န်းကျင်လောက် ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ကဖီးတစ်ဆိုင်ရဲ့
တစ်နေ့ဝင်ငွေဟာလည်း နေရာကောင်းကောင်း (Strategic Location)၊ ပုံမှန်ဖောက် သည် (Loyal Customer) သာရှိမယ်ဆိုရင် မသေးလှတာမို့
အကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါ တယ်။ ဒီနေရာမှာ လူငယ်တွေအတွက် ငွေအရင်းအနှီးက အဓိကအခက်အခဲ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဥပမာ- ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းမနိုင်ရင် သူငယ်ချင်းငါးယောက် လောက်ပေါင်းပြီး တစ်ယောက်ကို သိန်း၃၀စီလောက် ထည့်ပြီးလုပ်ရင်လည်း
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူများတော့ ၀န်ထမ်းစရိတ်လည်းသက်သာသလို အားလုံးတိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ ဆောင်ရွက်လို့ရတာမို့ အောင်မြင်ဖို့ Chance လည်း ပိုများပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေရဲ့ နဂိုဓလေ့ကိုက ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းတာမို့ အဲ့ဒီ စိတ်ဓာတ်တွေကို ပြုပြင်ပြီး အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြခြင်း
အားဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပိုမိုအောင်မြင်နိုင်ကြမယ် လို့ထင်ပါတယ်။
နောက် ICT နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကတော့ ကွန်ပျူတာပစ္စည်း Hardware ရောင်းဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ Service ပေးတဲ့လုပ်ငန်းပါ။
ဒီလုပ်ငန်းဟာ ယနေ့အချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ICT နဲ့ပါတ် သက်ပြီးအတွင်ကျယ်ဆုံးနဲ့ အလုပ်အဖြစ်ဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ Hardware
ရောင်းဝယ်ရေးအတွက် အရင်းအနှီးငွေကြေးပမာဏကတော့ ခုနက အင်တာနက်ကဖီးထက်စာရင် များစွာများပြားနေပေမယ့် ရရှိမယ့်အကျိုးအမြတ်ကလည်း
ရင်းနှီးငွေပမာဏ (Investment Amount) ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းခြေ Hardware နဲ့ Service Center တစ်ခုအတွက် ရင်းနှီးငွေ ကတော့
ကျပ်ငွေသိန်းငါးရာကနေ တစ်ထောင်အတွင်းမှာ ရှိပါတယ်။ ရင်းနှီးငွေ အဆင်ပြေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ အစုစပ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်သင့်ကြတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါ
ဒီလုပ်ငန်းမျိုးကိုတော့ တော်တော်များများက သတိ ထားမိကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒါကတော့ Website Service နဲ့ Web Ownership လုပ်ငန်းပါ။
လက်ရှိအခြေအနေ မှာ ပြည်တွင်း ICT လုပ်ငန်းတွေသိပ်မဖွံ့ဖြိုးလှတာမို့ အကျိုးအမြတ်မရနိုင်သေးပေမယ့် ဒီလုပ်ငန်းကနေ မက်လောက်စရာ Income နဲ့
Profit တွေကို ကျွန်တော်တို့ လှမ်းမြင်နေရပါတယ်။ Web-site business အတွက် ရုံး ခန်းနေရာ (office space) တွေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု(Investm-ent) တွေဘာမှ
သိပ်ကြီးကြီးမားမားမလိုပါဘူး။ အင်တာ နက် Service နဲ့ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိရင် အချိန်မရွေး နေရာမရွေး Website တစ်ခုကို Operate လုပ်လို့ ရပါတယ်။
အဲ..ဒါပေမယ့် ကျွမ်းကျင်မှု (Skill) နဲ့အကြံဉာဏ် (Idea) တော့လိုအပ်တာပေါ့။ ဥပမာ- ဒီကနေ့ ကမ္ဘာကျော် Google တို့၊ e-Bay တို့ဟာ ဒီလိုနဲ့အစပြုပြီး
အောင်မြင်မှု ရခဲ့ကြတာပါ။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေအတွက် လည်း တကယ့်ကိုကြီးကြီးမားမား အိပ်မက် Great Dream ကြီးတွေ
မက်ချင်တိုင်းမက်နိုင်တဲ့ နယ်ပယ်တစ်ခုပါပဲ။ ဖြစ် နိုင်ရင်အဘက်ဘက်က အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးစားကြည့် သင့်ကြပါတယ်။ အိပ်မက်ဆိုတာ
စစခြင်းမှာတော့ လောလောလတ်လတ် ကိုယ့်ပြည် တွင်းမှာ လုပ်လို့ကိုင်လို့အဆင်ပြေ အလုပ်ဖြစ်နိုင်မယ့် လုပ်ငန်းမျိုးလေးတွေကနေ
အစပြုလုပ်ကိုင်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ-Online ကနေ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတို့ ပါဆယ်တို့ ပို့ပေးတဲ့ Service လိုဟာမျိုးလေးတွေပါ။ Idea ကောင်း
ရင်ကောင်းသလောက် အကျိုးရှိနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါ တယ်။အားလုံးစဉ်းစားကြည့်ကြဖို့ပါ။
နောက် ICT နဲ့ပတ်သက်ပြီး လူတွေသိပ်မမြင်ကြ တဲ့ Hidden Opportunity တစ်ခုကတော့ အလွတ် Professional အဖြစ်ရပ်တည်မှု Freelance
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့နေရတာတို့ကို မနှစ်သက်တဲ့ လူငယ်တွေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ တစ်ခါ တစ်ရံမှာ Designer တစ်ယောက်ဟာ
ရုံးတစ်ခုခုမှာ လုပ်နေရင်တစ်လကို လစာငွေတစ်သိန်းဝန်းကျင်လောက် ပဲရနိုင်ပေမယ့် ပြင်ပကအပ်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို တကယ် ထူးထူးချွန်ချွန် လုပ်ပေးနိုင်ရင်
ပျှမ်းမျှတစ်လကို လေးငါး ခြောက်သိန်းလောက်အထိ ၀င်ငွေရရှိနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ တိုးတက်ပြီးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာတော့
ကွန်ပျူတာနဲ့နည်းပညာ အတိုင်ပင်ခံ (ICT Counsultant) တစ်ယောက်ရဲ့တစ်လ၀င်ငွေဟာ ဒေါ်လာသိန်းချီပြီးတော့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သင်ကြားရေးကိုဝါသနာပါတဲ့ လူငယ်တွေ အတွက်ကတော့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာ အသိအမှတ် ပြု ဘွဲ့၊ ဒီပလိုမာတွေကို
ထူးထူးချွန်ချွန်အောင်ပြီးသွားရင် အလွတ်သဘောနဲ့ Guide အဖြစ်သင်ကြားပြသပေးလို့ ရသလို ကွန်ပျူတာသင်တန်းတွေမှာလည်း အချိန်ပိုင်း နည်းပြအဖြစ်
၀င်ရောက်သင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။ Guide တွေ၊ သင်တန်းနည်းပြဆရာတွေရဲ့ ၀င်ငွေကလည်း တစ် လကို လေး/ငါးသိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီကနေ့ခေတ်ဟာ နည်းပညာခေတ် လို့ ဆိုတာနဲ့အညီ ICT နဲ့ဆက်စပ်ပတ်သက်နေတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဟာတခြားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေမှာထက်
စာရင် များစွာများစွာရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရဲ့ Political Climate တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှု၊ နည်းပညာဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်လာမှု၊ ဆက်သွယ်ရေးပညာ
(Communication Network) များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှု၊ လျှပ်စစ်မီးပိုမိုရရှိလာ နိုင်မှုတို့ပေါ်မူတည်ပြီး ပြည်တွင်း ICT လုပ်ငန်းများဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ့
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်ခြေတွေ များစွာရှိ နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ လက်ရှိအခြေအနေမှာ မိမိတို့မှာရှိတဲ့ Capacity၊ Skill၊ Ability
တွေ ကိုအခြေပြုပြီး ICT လုပ်ငန်းများ အားကောင်း မောင်းသန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်းအနှီးမရှိသေးလို့၊
အခြေအနေမပေးသေး လို့၊ အတွေ့အကြုံမရှိသေးလို့ စတဲ့ဆင်ခြေအကြောင်းပြ ချက် အတားအဆီး( barriers)တွေရဲ့တားဆီးမှုကို ခံမနေ ကြဘဲ
လိုအပ်တဲ့စွမ်းရည်တွေကို ဖြည့်ဆည်းရင်း အချင်း ချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြကာ မိမိတို့လက်တစ်ကမ်းမှာ ရှိတဲ့ အခွင့်အလမ်း(opportunities)တွေကို
ဆုပ်ဖမ်းပြီး ဘ၀ရဲ့ တက်လမ်းတွေကို လျှောက်လမ်းကြပါလို့ တိုက်တွန်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
ခုလို လမ်းညွှန်းပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် manawphyulay ရေ…
RSS နှင့် စာဖတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖတ်တယ်ဆိုတာအသေးစိတ်သိချင်ပါတယ်၊
ဒီလိုသိသင့်သိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းနောင်ထပ်ရေးပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ခုခောတ် အိုင်တီကျောင်းသားများမှာတော့တကယ်လုပ်တဲ့သူတွေနည်းနေပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားတွေများနေလို့ပါ။
ကျောင်းပြီးမှသာသင်တန်းတွေတက်ကြပြီးတော့လုပ်ကြတဲ့သူတွေများနေပါတယ်။:D အဲ့ဒါကြောင့်မို့ ဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့စာ တွေကိုများများရေးပေးသင့်ပါတယ်။